Natural Turquoise Beads Wholesale Supporter, Raw Turquoise | Zh gems
ZH GEMS - Turquoise Stone Suppliers uye Wholesale Turquoise jewelry Gemstone kambani
0 Yakamanikidzwa Turquoise Block
1 Raw turquoise yakaoma zvinhu
2-2 turquoise rondille / abacus beads
2-3 turquoise bhora mabhegi
2-5 turquoise zvidhinha / mraba beads
2-10 turquoise denderedzwa / donut beads
2-11 Turquoise Mwoyo Beads
2-13 turquoise cross madhiri
2-16 Turquoise Coin / Bhatani Beads
2-18 turquoise mupunga beads
2-21 Turquoise Rurimi
2-22 turquoise imbwa pfupa bone beads
2-23 Turquoise Buddha Bhead
2-26 turquoise disk hondi
3 turquoise cabhochon
3-2 turquoise oval Cabiyo
3-3 turquoise pear Cababokon
3-4 Turquoise Marquise / Navette Cababochon
3-5 turquoise square cushion cabhochoni
3-6 turquoise rectangle cushion cabhochoni
3-7 Turquoise Trapezoid KaBabochoni
3-8 turquoise isiriyo carchon
Turquoise triangle cabhochon
Turquoise Oblaten Cababokon
Turquoise Faceted Carchon
Turquoise Mwoyo Cababokon
4 turquoise yakavezwa & kushongedza
5 turquoise Jewelery
Turquoise vamwe maitiro
6 GEMSTone Rough Manyorero
9 Gemstone Yakavezwa & Orishental
10 Gemstone mutsipa
13 GEMSTone mhete
16 GEMSSTONE STONESA Zvishongo
17 Gemstone vamwe maitiro
18 Sirivheri / Goridhe / Charms Zvishongo
Turquoise angu mafoto
Fekitori uye sale office
Turquoise mine vedhio
Kugadzira hunyanzvi hwekuita vedhio
Production maitiro Vedio
Matombo matombo ekugadzira vedio
Gadzira hunyanzvi hwekuita vhidhiyo
Ratidza mukamuri yeVidio
Nei Tenga Kubva KuUS
Range zvigadzirwa zvekutanga
Iwo ese anogadzirwa zvinoenderana nemitemo yakasarudzika yenyika. Zvigadzirwa zvedu zvakawana nyasha kubva kumisika yemukati uye dzekunze.
Ivo vava kutumira kunze kwenyika dzese kunzvimbo dzinosvika mazana maviri.
Turquoise& Mabwe Anoita
ZH matombo anotungamira anotungamira wezvakasikwa turquoise matombo akasvinwa uye gemstone jewelry kuChina kweanopfuura makore gumi nemashanu.
Nenzira yeTurquoise mine uye turquoise mabwe akadzika matombo, marudzi akasiyana emabhuruku, marudzi emagetsi, matsuru, zvishongo, mhete, mhete, mhete uye dzimwe shangu uye dzimwe nhambo uye zvimwe zvishongo.
Zvakanaka& Fashoni Gemstone jewelry CraftsmansHipship
Kusanganisa kwehunyanzvi hwechinyakare& Mazuva ano Gemstone jewelry arts
Tarisa pane zvakasikwa maoko& Chaizvoizvo Wongororo
Yakanyatsoongororwa nemhando kubva kuomarara, kurapwa, kucheka, dhizaini, kugadzirwa kugadzirwa kwemhando yemhando& kuendesa
Ongorora zvedu Chigadzirwa Range
Zvese turquoise uye zvishongo zvishongo zvinogona kuendeswa kuongororwa kweGia; Mhando dzakasiyana-siyana dzeTurquoise nyuchi dzinozivikanwa mumusika wepasi rose; Isu tinopa zvakare turquoise.
ZH GEMS ndeyekutungamira kwechisikigo turquoise dombo mutengesi muChina kubva kuChina kubva 2010, turquoise jewelry Wholesale Vagadziri uye Gemstone kambani.
Turquoise uye dzakasiyana mhando dzeGemstone Beads, Cabhochons, 925 Sterd Silver Gemstonejewelry, 14k / 18k / 24k Gemstone jeweler
Natural fluorite shoma shoma svutugadzike shongwe chimiro mutsipa 20 inch size kubva 6-13mm
100% Yakasikwa Gemstone yeQuley
Natural timasitimu timeline mutsipa Multi Muvara mutsipa yeTower Shape Chimiro 18 Inch size kubva pa4-12-1mm
Spank Spiny Oyster uye Amazonite Gemstone mutsipa kubva ku5-12-12mm urefu 16inch
Natural Thinga Stainty Turquoise Tower SHE SHE SEPLACE LEXT LEXTE 16inch Size 4-8mm
Natural Turquoise Braceer Breday Chipo Braceet Diki Bracelet Kurapa Zvishongo
Spank Spiny Oyster mutsipa, urefu 16inch, saizi 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
Tinopa yakasiyana zvitarisiko kumuseka zvishongo zvisikwa zvakawanda uye zvarisingazivi kuti zvishongo vemifananidzo. Tichaziva kumusika zvinoda uye kuti anokurumidza mhinduro, kuisa pfungwa kupa mutengo-inoshanda customized zvinhu uye yepamusoro vatengi.
Simbisa iyo yekuraira yakaomesesa zvinhu, mhando, saizi, chimiro, kushivirira, hunyanzvi, huwandu, kuwanda, nguva yekutumira, chirongwa chekutakura. Zvakawanda zvekugadzira zvikamu zvichisimudzwa kurwisa kusimuka kwekuwedzera kwezvigadzirwa
Kuita kuti dhizaini yekudhirowa cad kana modle maitiro kuti udzikise maitiro ekuita iyo chaiyo meseji.
Tevedza isu tinosimbisa iwo chaiwo meseji kuvhura iyo modhi kana kuita iyo casting.
Ita iyo standard qa samples kuti isimbise zvinhu zvakakura zvekuseri kwemhando yepamusoro, tichaita katatu kadhi kadhi, ndeipi iri kune yedu QC vashandi veQC timu; Imwe ndeyemutengi weQC qc, yechitatu ndeimwe yedhipatimendi redu rekugadzira.
Tevera Simbisa Standard QA Sampuli kuti ugadzire huwandu hwakawanda huwandu hwehuwandu.
Kubva imwe tekoizi anoda mumwe.
We kuzvikudza pachedu pakusarudza mabwe zvinoshamisa creators vanakidzwe.
Shenezhen Hong Zheng Zekinoroji Limited yakagadzwa kweanopfuura makore gumi nemashanu. Iyo kambani iri kuitawo kufambira mberi kufambira mberi. Iyo ine fekitari yayo uye yakagadzira yayo yega brand zhgems. Isu tinotarisa pane zvakasikwa uye chaicho turquoise zvishongo. ZH GEMS ndeyechokwadi Gemstone mutengesi, inopa yakakwira-yekupedzisira turquoise yakaoma uye turquoise beads, zvishongo zve turquoise. Kana iwe uchitsvaga turquoise querows
Zvese zvekambani zvigadzirwa zvedu (turquoise uye gemstone jewelry) vakaedzwa neGia. Zvezvigadzirwa zvedu, unogona kutenga nechivimbo. Mabhonzo ekambani yedu turquoise akakurumbira mumusika wepasi rose. Isu tinopa zvakare turquoise isina kubatsirwa.
Mushure memakore gumi nemashanu ekupayona uye kugovera, mugove wemusika uye mukurumbira weZHGEMS zvisakaitwa zvakanyanya, uye huwandu hwemhando yepamusoro hwekutengesa hwakaenderera mberi hwakavandudzwa kwevatengi kuvimbika kwevatengi. Pfungwa yezvakavanzika zveshuwa zvishongo zvakaunzwa muchiratidzo chevatengi. Mune chinzvimbo chinotungamira mumusika ...
Shenzhen Hong Zheng Zekinoroji Limited Avanes"Ingananidza masevhisi ekutengeserana uye kuwanana kwepasirese, uye edza kuva china'S yekutanga-kirasi yekune dzimwe nyika yekutengesa kambani uye fekitori", na"Internization zera, inoshanda manejimendi, mutengo wakanatswa, uye kukura kwakagadzikana kwenhengo dzechikwata.""Hukama hwevatengi kuti uwane kwenguva refu-nguva yekuhwina-kuhwina" Sezvinorangana zvebhizinesi, zvichienderana neiyo tsika yekuenzana uye kuwirirana, ramba uchiwedzera mabhizinesi akasiyana, nemitengo yakanyanya, uye inoedza kusangana nezvinodiwa nevatengi, zvakatsaurirwa Imwe neimwe fang shamwari dzinodziya service.
Mutengi kutanga ndewekuti zvese zviri kutenderwa nevatengi, kuti ubatsirwe nevatengi, kupa vatengi vane huwandu hwemhando yepamusoro, kuti vatengi vanzwe vakakodzera mazita avo.
Shandisa yedu yekubata fomu pane yedu yekuonana ruzivo peji kana kutidzevedza kuti tikurukure ichi chigadzirwa.
All kambani yedu zvigadzirwa (tekoizi uye dombo rinokosha zvishongo) vaedzwa ne Gia. For zvinhu zvedu
Zvitsva zvevakatangwa zvigadzirwa
Famba fluorite yejewelry kugadzira
Mabhedha Akaitwa Matema Agate Slab Mbishi Yeonikisi Anokosha Chimedu Chimedu Chibedhi chePendant Necklace 10mm*45mm*5mm
Shenzhen Hongzheng Teekinoroji CO., LTD. Yakavambwa muShenzen, China yeChigadzira "yeZimbabwe
Nhare: +86 13751114848
WhatsApp: +86 1375111488
Kero yefekitori: Guangjingtou, Qingxi District, Dongguan Guta, China.
Ona kushamisika, ndapota bvunza vatengi vedu.